ဗေဒင် Archives - Page 30 of 33 - Latest Myanmar News
ပထမဝါဆိုလအတွက် စီးပွားလာဘ်လာဘပွင့်လန်းစေမည့် ယတြာ
June 20, 2020 by Latest Myanmar News
ပထမဝါဆိုလအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ (20.6.2020)မှ ပထမဝါဆိုလကွယ်နေ့(19.7.2020)အထိ ပထမဝါဆိုလဆန်း(၁)ရက်နေ့(20.6.2020)မှ ပထမဝါဆိုလကွယ်နေ့(19.7.2020)အထိတစ်လတာလုံး “စာရွက်ပြောင်တစ်ရွက်ပေါ်တွင် အောက်ပါ အတိုင်း ဆုတောင်းစာကို အပြာရောင်ရှိသော ဘောပင်(သို့) ဆော့ပင်များဖြင့် ရေးသားပြီး ပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်တွင် တင်ထားပါ။ “ထိုဆုတောင်းစာရေးထားသော စာရွက်ပေါ်၌ နွားနို့ကျို ပြီးသားတစ်ခွက်ကို ထပ်မံ၍တင်ထား၍ စံပယ်ပန်းအနည်းငယ်ဝိုက်ထည့်ပြီး မိမိအိမ်/လုပ်ငန်း ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား တင်ထား ကပ်လှူ ရပါမယ် မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား….။ အောက်ပါ ဂါထာတော်ကို (၁၆)ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်ပေးရပါမယ်။ ” ဥုံ ပထဗျာ အာကာသေ ပဗ္ဗတေစေဝ ဥဒကေ ဝနေ ယံယံ ပတ္တံ ပဝါဒေမိ သဗ္ဗ လာဘသိဒ္ဓိ ဥပတုံမေ။” ဆုတောင်းစာ ပထမဝါဆိုလ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရောကျန်းမာ၊ စိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် မကောင်းသော အညံ၊အပ၊အခိုက် များ … Read more
ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ပါးအားမေတ္တာပို့သနည်း
June 19, 2020 by Latest Myanmar News
ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ပါးအားမေတ္တာပို့သနည်း ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ပါးအားမေတ္တာပို့သနည်ိးုတော့ လူတိုင်းသိသလောက်ရှိကြပါပြီ အချစ်ရေးကိစ္စဆို ဘယ်နတ်ကို မေတ္တာ ဘယ်နှစ်ခေါက်ပို့ဆိုတဲ့နည်းလေးပေါ့။ ဒီနေရာမှာ မေတ္တာမပိုိ့ခင် ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ပါးကို ပင့်ဖိတ်ပြီး မေတ္တာပို့တော့ပိုပြီးထိရောက်တာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ အရင်ဆုံး ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ပါး ပင့်ဖိတ်နည်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကိုယ်စောင့်နတ် ၁၂ ပါး ပင့်ဖိတ်နည်း။ တန်ခိုးကြီးစွာ ကိုယ်မှာစောင့်တက် အမြဲကပ်သည့် နတ်မြတ်တို့တွင် နဖူးစာကို မှန်စွာရေးတက် သတ္တ-ဘာဂ နတ်မြတ်သနင်း ရှင်နတ်မင်းနှင့် မရွင်းစေတက် သူရဿ တီ နတ်ဒေဝီနှင့် လက္ခီမဟာ ထိုမှမနှေး အိမ်မက်ပေးတက် နတ်မြတ်ဗလိရာဇာ တန်ခိုးဖြာသည့် ဝါမသူရိယ ဇလသင်္ချေ ဂရာဝါက ယောဂတနှင့် ကလျာဏမိတ် ကျော်ဟိတ်အရှိန် နရိန္ဒာမငိး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မျှတက်စွာသည် စန္ဒာဒေဝီ သိညီသညာ မဟာ ပိဿ … Read more
ကလေးက၀တုတ်နေတာပဲ လို့ပြောခံရရင် နောက်နေ့ဖျားရော…အဲလိုဖြစ်တာကို အံ့မိခြင်းလို့ခေါ်တယ်…(အံ့မိခြင်းပျောက်စေဖို့)
အံ့မိခြင်း အံ့မိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲ အရောင်းအဝယ်တွေကောင်းနေရင်းကနေ ဗြုန်းကနဲ လာဘ်တွေတိတ်သွားတယ် ဈေးရောင်းအား ကျသွားတယ် ငွေတွေဝင်နေရင်း ငွေဝင်ရပ်သွားတယ် ကျန်းမာရေးကောင်းနေရင်းက​နေ ​ဖောက်သွားတယ်…. စသဖြင့်ပေါ့နော် … အကောင်းတွေကနေ မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့အံ့မိသွားတာ။ ဘာကြောင့်အံ့မိလဲဆိုတော့ ဥပမာ ကျွန်​​တော်အဝတ်အစားအသစ်ဝတ်တာမြင်ရင် ” ဟာ …လန်းနေပါလား… အံမယ် … အဆင်ပြေနေပါလား လှလို့ ပလို့ ဝလို့ပါလား ” အဲလို အံ့ဩတကြီးပြောခံရရင် အံ့မိပါတယ် ရွှေတွေငွေတွေနဲ့အပြင်သွားတယ် အဲ့မှာကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့သူတွေက ဟာ….. မင်းကြည့်ကောင်းလာတယ် ဈေးတွေကိုယ်အရမ်းရောင်းနေရတဲ့အခါမှာ ဟာ…အရမ်းရောင်းရတယ်နော် မင်းကိုအားကျတယ်…. အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုပြောလာတဲ့စကားတွေက ကာယကံရှင်ကိုထိပါတယ် အံ့မိစေပါတယ်ဗျာ ကလေးလေးဝဝတုတ်တုတ်လေးကို သနပ်ခါးအဖွေးသားလူးပီး ရပ်ကွက်ထဲခေါ်သွားတော့ဘေးကလူတွေက ဟယ်နင့်ကလေးလေးကဝတုတ်နေတာ ပဲ ချစ်စရာကြီးနော် အံ့သြတကြီးချီးကျူးကြတာ အဲ့လိုဆိုအဲ့ကလေးဘာဖြစ်သွားလဲသိလား နောက်ရက်နေမကောင်းဖြစ်တာ အဲ့လိုလုပ်မပြောစေချင်ဘူး မလုပ်စေချင်ဘူး တားလို့မရပါဘူး ပုထုစဉ်လူသားတွေမို့ … Read more